VONDRO’NY MPANOHITRA : TSY TAFIDITRA TAO AMBOHINJATOVO – MyDago.com aime Madagascar
VONDRO’NY MPANOHITRA : TSY TAFIDITRA TAO AMBOHINJATOVO
Tsy tafiditra tao amin’ny kianjan’ny demokrasia Ambohinjatovo androany ny vondron’ny mpanohitra raha saika hanatitra voninkazo teny an-toerana. Herim-pamoretana mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no efa niatrana mialoha niambina izany kianjan’Ambohinjatovo izany. Tokony ho tamin’ny 11 ora maraina no nigadona tenyan-toerana ireo mpitarika nahitana an-dramatoa Ravololomanana Lalatiana, ny pasitera Eduard Tsarahame. Teo amin’ny Esplanade Analakely no nifamotoana izy ireo ary avy eo niakatra nihazo teny Ambohinjatovo. Nisy ny fifampiresahan‘izy ireo tamin’ireo herim-pamoretana ireo teny an-toerana. Tsy nahazo niditra ny kianja tao anatiny izy ireo fa teo amin’ny vavahady be izay nikatona no napetraka ny voninkazo. Taorian’izay dia nitafa tamin’ny mpanao gazety ramatoa Ravololomanana Lalatiana. Nambarany tamin’izany fa raha nitokana ity kianja ity Rajoelina tamin’ny naha mbola ben’ny tanana azy ny 17 janoary 2009 ary nanao izany ho kianjan’ny demokrasia. Nitokana ny kianjan’ny makis sy Antsonjombe izy hoy Lalalatiana dia heverinay fa ny tolona ho an’ny demokrasia izay nametrahana azy teo amin’ny toerany no takianay. Tsy avelanay handalo fotsiny ity daty ity fa natao ho entina homarihana fa tsy natao ho adinoina. Tsiahivina moa fa feno 4 taona androany 17 janoary ny nitokanan-dRajoelina io kianjan’ny demokrasia io. Hatramin’ny nahatongavany teo amin’ny fitondrana anefa dia tsy nahazo izany kianaj izany ireo nanohitra azy. Baomba mandatsa-dranomaso sy fisamborana no niandry azy ireo. Lasa faritra mena mihitsy aza ka ireo be baoty no asaina miandry izany kianja izany.
Vondron’ny mpanohitra : « avereno amin’ny vahoaka ny kianjan’ny demokrasia »
4 réflexions sur « VONDRO’NY MPANOHITRA : TSY TAFIDITRA TAO AMBOHINJATOVO »
Fa vao2 ve izany e???
‘taoko azy ny laka !!!
Fahalalam-pomba voalohany aloha dia esorina ity solomaso ry GIDRO rehefa miresaka @ olona a!!
Vehivavy tanam-polo io dia tsy menatra mirantiranty daholo ireo alika voky taolana, MAHONENA!!!!!
hafa ny Gasy raha mahazo basy fa na lalitra manidina aza dia tofirina, fa mba natera-behivavy ve
ireto izy sa nivoaka t@ vata-kazo????MAHONENA eeeeeeeeeeeeMAHAMENATRA!!!!!!
« fa ny tolona ho an’ny demokrasia izay nametrahana azy teo amin’ny toerany no takianay. » Fanonganam-panjakana ve dia lazaina fa tolona ho amin’ny demokrasia. Efa mirediredy daholo
Ny fahadisoana lehiben’ny FOLM dis izy ireo tsy manohina ny filoha Ravalomanana, izy ireo dia manohina ny ni…ni. Nihevitra matsy izy ireo hoe rehefa manohitra an’i Rajoelina dia ampy. Ireo Mpanohana ny ni…ni dia tsy mijery ny tena vahaoaka. Tsy mba manotany ny vahoaka. Raha nisy ny fiarahana t@ ankolafy Ravalomanana dia mety ho tsara ihany.Ny vahoaka Malagasy anefa efa raikitahotra ny hifanehatra @ ireo EMMOREG manohana fatratra ny fanoganam-panjakana.
Tokony averina ny tahakan’izao fa hialovan’ny greve generale aloha dia avy eo conference de presse, ary indrindra ny fanambarana ny hery fa tsy mandeha mitokana tahak’izao.
..’k’inona moa no tsy mahatafavoaka antsika raha tsy ity fitsitokotokoana
sahala @ tain’amboho ity e???
Te hifidy ny lohany nefa matahotra ny masony daholo, mbola ilay fitiavan-tena ihany io e!!!halako bika tsy tiako tarehy.
Tsy mba izay ahatafavoaka aloha jerena dia avy eo miady toerana, fantany koa aloha fa tsy aharesy an’i Dada izy e!!!
Mbola ho ela ity toetsaina !!!
Précédent Article précédent : FILOHA RAVALOMANANA MARC : TSY HISY FIFIDIANANA IZANY ETO RAHA TSY TONGA ANY IZAHAY
Suivant Article suivant : LERIVA MANAHIRNA : ADIDINTSIKA NY FAMPODIANA AN’I DADA